Na Lapland, nọrọ na iko igloo | Akụkọ Njem
Artic Resort Kakslautten, na Swedish Lapland
Osimiri na Resorts | | Osimiri, Suecia
North nke Sweden bụ mpaghara nke Lapland. Na mbu mpaghara a nile bụ nke okpueze Sweden mana kemgbe narị afọ nke iri na iteghete enwere Swedish Lapland na nke Finnish. Lapland bụ ebe dị mma ịga ezumike ụbọchị oyi ma jiri kpakpando rọọ nrọ.
Nhọrọ kachasị nke mbụ bụ ịnọ bụ Ebe ezumike Kakslautten, a arctic Resort nke nwere enyi na enyi iko igloos na ị hụrụ na foto a. Nwere ike were ya na ị na-ehi ụra n’otu n’ime ha? Igwe iko a na-esonyere cabins, igloos snow na ụlọ ọdịnala. Ma n’enweghi obi abụọ iko igloos kachasị mma.
Igwe iko a bụ maka mmadụ abụọ, dị mma maka ndị di na nwunye, ma nye gị ohere ịnụ ụtọ mbara igwe abalị dị egwu nke Lapland. Ha nwere ụlọ mposi nkeonwe, akwa abụọ na ọmarịcha mma. N'ezie, mmiri ịsa ahụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nọ n'èzí, na ụlọ ọzọ, n'ihi ya, ha na-arụ ọrụ dị ka ụdị ogige mara mma. Anaghị m eme mkpesa!
Ọtụtụ mmadụ na-abịa Ụlọ ihe nkiri Artic Kakslauttanen ịnụ ụtọ Northern Light, n'agbata ngwụsị August na njedebe nke Eprel. Maka oge nke afọ a, ụfọdụ iko eji agba ọhụụ nwere ike ịnwe mmadụ anọ na igwe mmiri nke aka ha adịworị njikere. Mma! Achọghị m ịkọrọ ụlọ ịsa ahụ, ọ bụ ezie na agaghị m eche ụra na iko igloos ndị a.
N'oge oyi a nkwari akụ na Lapland awade husky ma ọ bụ reindeer safaris, ịnyịnya, ịnyịnya sleigh, njegharị iji hụ na Aurora borealis, Safari ọdọ mmiri azu kpụkọrọ akpụkọ, ịgba ọsọ, skiing na snowboarding. Lọ nkwari akụ ahụ na-emepe n'oge ọkọchị ma na-enye ụdị ọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọrụ gụnyere sauna anwụrụ ọkụ, igwu mmiri n'oge oyi, ụlọ nri, ụlọ ahịa ihe ncheta na njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Artic Resort Kakslautten, na Swedish Lapland
Calanque d'En-Vau, turquoise mmiri dị na ndịda France
Jiri ụgbọ mmiri si New York si Europe pụọ